Kenya oo dalalka awoodda ku leh QM ka dalbanaysa in la hakiyo qorshaha ICC ee madaxda dalkaas – Radio Daljir
Oktoobar 17, 2013 4:17 b 0
Nairobi, October 17, 2013 – Dowladda Kenya ayaa dadaal dheer ugu jirta weli in la hakiyo maxkamada ku socota hugaamiyaasha sar sare ee dalka madaxweyne Uhurru Kenyatta iyo ku xigeenka William Rutto oo isna jooga xaruunta maxkamada.
Kenya ayaa haatan ku dadaalaysaa in ay dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa Qaramada midoobey ku leh codka fiita ka dhaadhiciso in maxkamada lagu cadaadiyo in la joojiyo dacwada ku socoto hugaamiyasha sar sare ee Kenya.
Wasiirka arrimaha dibeda Kenya Aamina Maxamed Jibriil ayaa toddobaadkan bartamihiisa kula kulmay dalka Czech republic diplumaasiyiin ka socda dalalka, Ruushka, USA, Britain iyo France, si ay uga dhaadhiciso qorshaha Kenya ee maxkamada ICC.
Dowladda Kenya ayaa horay u gudbisay qaraarkii ka soo baxay madaxda Afrika dhowaan mar ay ku shireen AdisAbaba, kaas oo lagu sheegay in Afrika aysan ogolaan doonin in la maxkamadeeyo hugaamiye Afrikaan ah oo xil haya.
Xoghayaha guud ee Qaramada midoobey Bank Moon ayaa la sheegayaa in uu ka soo horjeedo go?aanka madaxda Afrika, warar ka imanaya New York ayaa tibaaxaya in xoghayahu ku adkaysano in la sii amba qaado heshiiska Roma ee dalalka xubnaha ka ah ICC.
Madaxweynaha Kenya Uhurru Kenyatta ayaa la filayaa in bisha dambe looga yeero maxkamada dembiyada caalamiga ah ICC, halka hadda ay maxkamadayn ku socoto madaxweyne ku xigeenka dalkaas William Rutto oo jooga Holland.